डेंगुका बिरामी भेट्न अस्पतालमै पुगे रबि र दिपक , के हो डेंगु, कसरी नियन्त्रण गर्ने ? – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २५ भाद्र बुधबार १३:११
एजेन्सी, काठमाडौं। हिजो आज शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल बिरामीहरुको भिड छ । शुक्रराज अस्पतालमा डेंगुका बिरामीको उपचार निःशुल्क हुने घोषणापछि चाप बढेको हो । डेंगुको शंका गर्दै जाँच गर्न आउनेहरुको संख्या बढेपछि अस्पतालमा थप काउन्टर र चिकित्सकहरु थपेर विरामीहरुलाई सेवा दिने काम भइरहेको छ । तर पनि एक जना विरामी ३ घण्टासम्म कुर्नु परेको छ ।सिन्धुपाल्चोकका रन्जित दंगाल टिभी हेरिरहेका बेला हातमा लामखुट्टेले टोक्यो । पछि रोगका लक्षण डेंगुको देखिएपछि उनी अहिले टेकुस्थित शुक्रराज अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।
PREVIOUS Previous post: इतिहासमा पहिलो पटक सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुहुने प्रधानसेनापति ज्यू भनसुन गरेर विभिन्न मिसनमा विदेश जाने प्रथा बन्द होस् !
NEXT Next post: बुटवलका युवा इन्जिनियर शिशिरले बनाए पानीबाट गाडी चलाउने उपकरण !